पतिले आत्महत्या नगर भन्दाभन्दै पत्नीले गरिछाडिन्………. – Dainik Sangalo
पतिले आत्महत्या नगर भन्दाभन्दै पत्नीले गरिछाडिन्……….
प्रकाशित मिति: सोमबार, आश्विन ०४, २०७८ समय: १६:३४:३७
अाज भालि निकै दर्दनाक र फरक किसिमका घटनाहरू घट्ने गरेका छन् । माहामारिका बिच यस्ता समस्या अजै बढि अाउने गरेकाे छ । मानिसहरू सानाे सानाे कुरामा पनि मर्ने र मार्ने कुरा गर्छन् वा हत्या र अात्महत्या जस्ताे गम्बिर घटनाकाे शिकार र शिकारि भएका छन् ।
त्यस्तै घटना मोरङको सुन्दरहरैँचा–८ सलकपुरका विनोद काफ्ले र उर्लाबारी नगरपालिका दुर्गापुरीकी रोजिना गिरीकाे छ । जसले गत वर्षमात्र आफ्नो प्रेमलाई विवाहमा रुपान्तरण गरेका थिए ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट भएको चिनजानलाई विवाहमा रूपान्तरण गरेको एक वर्ष पनि पुग्न नपाउँदै पति–पत्नीबीचको बिछोड भएको छ ।
विनोद विवाह गरेर रोजिनालाई घरमा राख्दै वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबई पुगेका थिए । त्यहाँ काम गरिरहेका उनले शनिबार बेलुका रोजिनासँग फोनमा कुरा गरे ।
रोजिना पनि शनिबार सलकपुर बजारमा किनमेल गरेर फर्किएकी थिइन् । विनोदसँगको कुराकानीमा रोजिनाले पटक–पटक आफू पीडामा रहेको भन्दै आत्महत्या गर्ने निर्णय सुनाइन् ।
रोजिनाले पीडाको विषयबारे कुरा गरिनन् । आत्महत्या गर्ने रोजिनाको निर्णयबारे सुरुमा त विनोदले विश्वास गरेनन् तर पटक–पटक उनले म मर्छु भन्ने कुराकाे जिकर गर्दा विनोदले सम्झाए ।
अनेकन आग्रह गरे । तर रोजिनाले ढिपी कसिरहिन् । कुराकानीपछि विनोद सुते । बिहान फोन गरे तर उठेन । म्यासेज पठाए त्यसकाे पनि जवाफ पाएनन् । अनि अकाउन्ट खोलेर हेरे । त्यहाँ पनि अनलाइन पाएनन् ।
एकैछिनमा परिवारबाट फोन आयो । परिवारले रोजिना रहिनन् भन्दा विनोद छाँगाबाट खसेजस्तो भए । अनि उनलाई परिवारले रोजिनाको माइतीपक्षमा सूचना पुर्‍याइदिन भने ।
विनोदले सोहीअनुसार माइती पक्षसँग कुरा गरे । उनीहरूको दुई परिवारबीच सम्धीभेटसमेत भएको थिएन । त्यसैले उनीहरूबीच प्रत्यक्ष कुराकानी हुन नसकेको बताइन्छ ।
यता, माइती पक्षले रोजिनाले आत्महत्या गरेको नभई हत्या हुनसक्ने आँकलन गर्दै प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिने तयारी गरेका छन् । रोजिनाकी ठुलोबुबाकी छोरी (बहिनी) मनीषा क्षेत्री केटिएम दैनिकसँग भन्छिन्, ‘मलाई पनि हिजो बिहान यसबारे खबर आयो । तत्काल भिनाजू (विनोद) लाई म्यासेज पठाएँ ।
उहाँले फोनमा रोजिनाले छोडेर गएको भन्दै विरह पोख्नुभयो । तर उहाँको पनि निष्कर्ष आत्महत्या नै हो भन्ने छ । तर दिदीको अनुहार र शरीरमा निलडाम छ ।’
उनका अनुसार हालैमात्र उनीहरूले सलकपुरको उक्त घर बेचेका रहेछन् । घर बेचेको पैसामा किचलो हुँदा हत्या भएको हुनसक्ने उनको आशङ्का छ ।
‘त्यस्ती सोझी मेरी दिदीले त्यस्तो कठोर निर्णय लिन सक्दिनन्’, उनले भनिन्, ‘भिनाजु पनि आज फर्किँदै हुनुहुँदोरहेछ । पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि थप सत्यता बाहिर आउला । तर उनको हत्या भएको हुनुपर्छ ।’
शवको प्रकृति हेर्दा आत्महत्या गरेको हुनसक्ने उनले जानकारी दिए । कोठामा भित्रबाट चुकुल लगाएर लोबेडमा घोप्टो परेको अवस्थामा मृत भेटिएको उनको भनाइ छ ।
शरीर लोबेडमा रहेको भएपनि फेनमा सल बाँधिएको र कोठाको चुक्कुल भित्रबाट लगाएको पाइएकाले आत्महत्या गरेको हुनसक्ने प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीले भने झुण्डिएका कारण रगत सोहोरिएर निलडाम हुनसक्ने जनाएको छ ।
Last Updated on: September 20th, 2021 at 4:34 pm